Qofka Afaraad? Qofka Shanaad? Qofka Naxwaha iyo Suuqgeynta | Martech Zone
Qofka Afaraad? Qofka Shanaad? Qofka Naxwaha iyo Suuqgeynta
Sabtida, Juun 1, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani ma noqon karto isbarbardhig sax ah, laakiin waxaan ka fekerayay suuqgeynta ku saleysan webka maanta oo aan la imid fikir. Waxaan marar badan ka hadlay daciifnimada websaydhada si fudud u ah 'calaamadaha dayrka'. Waan aqrinayaa Wadahadal qaawan: Sida Blog-yada ay u badalayaan Qaabka Ganacsiyadu ula Hadlaan Macaamiisha waxayna la hadlaysaa isla arintaas. Waxaan ogaaday inaan dambiile ahay sida ninka xiga - anigoo dhisay dhowr goobood oo aan u oggolaanin is-dhexgal badan. Waxaan dhammeeyey akhrinta 'The catcher in the Rye'. Qaabka qoraalka ee uu adeegsado Salinger waa madadaalo maxaa yeelay waa wada hadal.
Marka aynu eegno qofka naxwe ahaan, qorayaashu wax bay ka qori karaan aniga, annaga, adiga, ama iyagu. Tan waxaa loo yaqaanaa "Kow", "Labaad" iyo "Saddexaad" qof siday u kala horreeyaan. Malahayga ayaa ah in suuqgeyntu aysan aad uga duwanayn. Badanaa, waxaan la kulannaa bogag internet oo ku qoran aragtida Qofka Koowaad, Labaad, ama Saddexaad. Laakiin, sida akhriska buugga, qodobbadaas aragtidu si caddaalad ah ayey u xaddidan yihiin. Waa qoraaga kula hadlaya adiga, akhristaha. Ma jirto fursad aad ku weydiiso su'aalo ama aad ku siiso jawaab celin.
Fursadda loogu talagalay suuq-geynta dijitaalka iyo keydka macluumaadka ayaa ah inay iyagu macquul yihiin qof "Afaraad" ama "Shanaad". Taasi waa, Qofka afraad wuxuu u oggolaan karaa akhristaha inuu la falgalo qoraaga. Tani waxay noqon kartaa faallooyin ku saabsan baloogyada, ama waxay noqon kartaa shirarka ku saleysan websaydhka, raadinta gudaha ee adag, foomamka jawaab celinta, iwm. Tani waxay u oggolaaneysaa wada xiriir laba dhinac ah, khibrad aad u hodan ah.
“Qofka Shanaad” wuxuu qaadayaa tallaabo kale oo dheeraad ah. Ka waran u oggolaanshaha akhristayaasha inay la hadlaan akhristayaasha kale. Kawaran haddii aad u oggolaatay macaamiishaadu inay wax kaa qoraan adiga oo adeegsanaya websaydhkaaga? Khatar ah? Hubaal, haddaadan dhageysan iyaga. Markaad weydiisan weydo jawaab celinta macaamiishaada oo aad ku sameyso isbeddel ku saleysan jawaab celintaas, uma baahnid inaad walwasho. Jawaab celinta iyo macaamiisha ma sii raagayaan!
Waxaan kula tartami lahaa ururada inay hubiyaan in dadaalkooda suuq geynta ay shaqeynayaan oo dhan ee kor ku xusan:
Naftaada ka hadal. (Anaga)
La hadal rajadaada. (Adiga)
Ka hadal macaamiishaada (Iyaga)
U oggolow macaamiishaadu inay kula hadlaan (Haye)
U oggolow macaamiishaada / rajadaadu inay wada hadlaan (Aniga).
Faallooyin soo dhawow.